Fampirantiana amin'ny IMEX? Fampitandremana amin'ny hosoka
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Fampirantiana amin'ny IMEX? Fampitandremana amin'ny hosoka
IMEX dia iray amin'ireo fampirantiana miorina indrindra amin'ny indostrian'ny Fihaonana sy famporisihana.
Natombok'i Ray Bloom IMEX dia fantatra amin'ny fampisehoana varotra MICE voalohany isan-taona izay heverina ho fampirantiana lehibe indrindra sy maharitra indrindra isan-taona any Frankfurt sy Las Vegas.
Androany IMEX dia nampitandrina ireo mpampiranty mba tsy hianjera amin'ny scam.
IMEX dia namoaka ity taratasy manaraka ity tamin'ny fampiratiana:
Mampalahelo fa tsy maintsy mandefa fampitandremana momba ny International Fairs Directory isika.
International Fairs Directory (fantatra ihany koa amin'ny hoe IFD, Expo Guide, Fair Guide, Conscript Data ary Connect Publisher) dia katalaogy an-tserasera sandoka izay mandefa taratasy mikendry ireo mpampiranty avy amin'ny hetsika samihafa manerantany, manentana azy ireo hanao sonia takelaka hidirana ao amin'ny lahatahiry. .
Raha manao sonia ny taratasy ianao dia miditra fifanarahana mandritra ny telo taona mitentina dolara an'arivony maro. Handa ny hanaiky ny fangatahana fanafoanana izy ireo ary hanakorontana anao amin'ny fandoavam-bola mandritra ny taona maro. Ireo fikambanana toa ireny dia tsy misolo tena ny IMEX na mpikarakara hetsika hafa.
Ny International Fairs Directory dia fisolokiana ary tsy manana ny toerany ara-dalàna. Raha ny fahafantaranay azy dia tsy mbola nisy olona enjehina noho ny tsy fanarahan-dalàna.
Ny toro-hevitra avy amin'ny Fikambanan'ny mpikarakara hetsika momba ny Expo Guide dia ny tsy hamenoana ary hamerina ilay taratasy. Na izany aza, raha manana ianao, azafady mba jereo ny AEO ary IAEE tranokala hahazoana torohevitra.
IMEX Frankfurt no seho manaraka.
Fandrakofana eTN bebe kokoa amin'ny IMEX kitiho eto
Simba ny lazan'ny FAA raha lasa heloka bevava kosa ny fanamarinana Boeing MAX 8
Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight, World Telo dia nanambara ny Jura Sea North Curaçao 2019